Xildhibaan Xasan Cawaale Oo Ka Dayriyay Dhalinyaradda Isticmaala Khamriga iyo Xashiishadda Oo Ku Soo Batay Dalka | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Xildhibaan Xasan Cawaale Oo Ka Dayriyay Dhalinyaradda Isticmaala Khamriga iyo Xashiishadda Oo Ku Soo Batay Dalka
Hargaysa (SDWO.com): Guddoomiyaha gudi hoosaadka arrimaha bulshadda ee golaha Wakiiladda Somaliland Xildhibaan Xasan Cawaale Caynaan, ayaa ka dayriyay heerka ay dalka ka marayaan Maan-dooriyeyaasha Khamriga iyo Xashiishadda oo muddooyinkan danbe si aad ah ugu soo batay magaalooyinka Somaliland.
Xildhibaan Xasan Cawaale, ayaa hoosta ka xariiqay in magaalooyinka Somaliland ay si aad ah ugu soo badanayeen dhalinyaradda isticmaasha maan-dooriyeyaasha Khamriga iyo Xashiishadda, iyadoo waxyaabahaasi lagu iibiyo magaalooyinka.
Xasan Cawaale, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa, waxa uu tilmaamay in hay’adaha dhinaca amaanka qaabilsan looga baahan yahay in ay wax ka qabtaan dadka ka ganacsadda ama dalka soo geliya mukhaadaraadka.
“Mudooyinkan danbe waxaa dalka ku soo batay, Khamrigii iyo xashiishadii, iyadoo ay jiraan dhalinyarro fara badan oo isticmaala. Waxaan leeyahay, dadka keenaya waxyaabahan waa in hay’adaha amaanka loo diraa, isla markaana la soo qabtaa cidii keenaysa dalka Xashiishadda iyo Khamriga-ba” ayuu yidhi xildhibaan Caynaan.
Geesta kale xildhibaan Caynaan, ayaa ugu baaqay ciidamadda booliska in ay baadhitaan ku sameeyaan gawaadhiga Qaadka ka keenna Itoobiya, isagoo xusay in ay suurto-gal tahay in gawaadhiga Qaadka lagu soo dhex qariyo Khamri ama Xashiishad.
Waxaanu yidhi “Waa in la baadhaa marka ay wadanka soo gelayaan gawaadhiga Qaadka keenaya, sababtoo ah baabuurka Qaadka ka soo qaada Ethiopia, laguma baadho meelaha Kaantarooladda ah iyo marka ay dalka soo gelayaan, waxaana suurto-gal ah in Qaadka la soo hoos geliyo ama lagu soo dhex qariyo Khamriga iyo Xashiishadda”.
Isagoo hadalkiisa sii watay-na waxa uu yidhi “Dad badan oo aynaan garanaynin oo wadamo kale ka yimid, oo Yaman iyo dalal kale-ba ka yimid ayaa dalkeena jooga, dadkaasina waxaa suurto-gal ah in ay keenaan waxyaabaha maan-dooriyeyaasha ah.
Waxaanan ku baqayaa in ciidamadda amaanka loo diro oo ay baadhitaan ku soo sameeyaan, waa in arrimahaasi wax laga qabto”.